Carfts Card ကို RFID Wiredrawing Card ကို, RFID Wiredrawing Film Card, RFID Wiredrawing Gold Film Card, RFID Wiredrawing Silver Film Card, Wiredrawing Card ကို, Wiredrawing Film Process Card, Wiredrawing Gold Film Card, Wiredrawing Process Card, Wiredrawing Silver Film Card
Can customizeavariety of RF frequencies (LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF),avariety of materials (PVC / PET / PETG / စက္ကူ).
Cardbody ပစ္စည်း: PVC / PET / PETG / စက္ကူ
This card can show all kinds of color, can present special reflect changes in cards of any part of the body, အလွန်ကောင်းသောအမြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, and can enhance the anti-counterfeiting and anti scanning copy, so that the card circulation more secure. The cards looks like stainless steel material carefully crafted cards, looks very noble, with up to reveal the identity of the noble.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, channel gate control, လက်ဆောင်ပေးမယ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေလျှောက်ထား, ဟိုတယ်များ, ဘား, စားသောက်ဆိုင်, ကဖေး, ရုပ်ရှင်ရုံ, အလှပြင်ဆိုင်, အသားတင်ကဖေး, ဂိမ်းကအခန်း, ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားဒေသများ.
I am interested in your product Wiredrawing Card, Wiredrawing ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Card ကို, RFID Wiredrawing Card ကို
prev: ဖောင်းကြွ Card ကို, micro-ကယ်ဆယ်ရေး Card ကို, RFID ဖောင်းကြွ Card ကို
နောက်တစ်ခု: RFID LED Flash Card, LED Flash Smart Card, Built-in LED Flash Smart Card, LED Flash CPU Card, LED Flash IC Card